DAAWO: Ayaa Ku Yidhi Zinedine Zidane Way Ka Dhamaatay Kubbada Cagtu? Muuqaalka Bandhigii Zidane Ee Kulankii France 98 Vs All Stars 98 Oo Kaa Yaabin Doona. – Laacib.net
Mar la maqlo magaca Zinedine Zidane waxa uu ka mid yahay mucjisooyinka kubbada cagta ee ka ciyaartoy ahaan, ka tababare ahaan iyo waliba ka shaqsi ahaan, waxaana lagu tilmaamaa shaqsi khaas ah oo ayna jirin cid la mid ah oo kubbada cagta soo martay. Waxa uu aduunka ugaga soo yaabsaday dhaqankiisa gaarka ah, waxa uu kaga soo yaabsaday xirfadiisa ciyaareed ee ka ciyaartoy ahaan iyo waliba ka tababare ahaan.
Laakiin wali marka aad maqasho magaca Zinedine Zidane waxaad xusuusanaysaa mucjisooyinkii uu kubbada cagta ka soo sameeyay balse haddii aad mooday in ay ka dhamaatay waad qaldan tahay, waxaana ku sixi doona muqaalka aanu halkan idiinku soo gudbin doono.
Habeenimadii talaadadii waxaa la ciyaaray kulan xiiso badnaa oo dhex maray kooxdii xulka qaranka France ee koobka aduunka ku soo guulaystay sanadkii 1998 kii waxaana ka hor yimid xidigo xul ah oo laga sameeyay ciyaartoydii 1998 kii wadamada kale ee aduunka u ciyaarayay koobkii aduunka ee France 1998 kii.
Waxaa soo ifbaxay muuqaalka goos gooska kulankii France 98 vs All Stars 98 kaas oo uu Zinedine Zidane waxdaro ka dhigay isla markaana uu ku muujiyay in wali uu si buuxda u hayo xirfadiisii ciyaareed ee kubbada cagta isaga oo waliba si aanad rumaysan karin ugu xaragoonaya.
Marka uu Zinedine Zidane kubbada hayo waxaa la dareemayaa in wax dhici karaan waxaana isku diyaarinayay dhawr ciyaartoy oo kooxda ka soo horjeeday ah waxaana la arkayay Zidane oo bixinayay kubbad wareer ah iyo waliba farsamooyinkiisii uu caanka ku ahaa.
Kooxdii xulka qaranka France 98 ayaa si aan layaab lahayn 3-2 ugu garaacay kooxda All Stars 98 iyada oo kooxda uu Zinedine Zidane qaybta ka ahaa ay ku jireen Laurent Blanc, Thierry Henry , Emmanuel Petit iyo halyayadii kale ee koobka aduunka France kula soo guulaystay 1998 kii.
Kulankan ayaa lagu xusayay sanad guuradii 20 aad ee ka soo wareegtay markii uu xulka qaranka France ku guulaystay koobka aduunka waxaana kooxda xidigaha kale ee aduunka laga soo xulay ka mid ahaa Edgar Davids, Samuel Eto’o iyo Hristo Stoitchkov.
Ma doonayo in aan hadalka iyo qoraalka idinku badiyo ee waxaan jeclaystay in aan idiin kala baxo muuqaalka goos gooskii kulankii France 98 vs All Stars FIFA 98 oo aad halkan hoose si buuxda ugaga bogan karto Laacibtv Ka Daawo Muuqaalkan
15-06-2018 at 3:44 am
Maxaa dhacay video walba ma shaqaynayo sawir video been ah ayuum baad meesha la timaadaan mar walba!